Ciidamo dhar-cad ah 'oo la geeyey' baarlamaanka iyo xaaladda oo aad u kacsan - Caasimada Online
Home Warar Ciidamo dhar-cad ah ‘oo la geeyey’ baarlamaanka iyo xaaladda oo aad u...
Ciidamo dhar-cad ah ‘oo la geeyey’ baarlamaanka iyo xaaladda oo aad u kacsan
Muqdisho (Caasimada Online) – Sida ay sheegayaan wararka laga helayo xarunta baarlamaanka Somalia ee Villa Hargeysa waxaa halkaasi lagu arkay ciidamo dhar-cad ah oo la soo dhoobay dhismaha xaruntaasi oo ay maanta kulan xasaasi ah ku leeyihiin xubnaha golaha shacabka.
Mahad Salaad oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda xarunta golaha shacabka ayaa xusay in ciidan uu ku tilmaamay maleeshiyaad lasoo dhoobay xarunta Villa Hargeysa, islamarkaana wata Bistoolado, sida uu hadalka u dhigay.
Xildhibaanka ayaa nasiib darro ku tilmaamay in ciidamo dhar-cad loo adeegsado mudanayaasha baarlamaanka, iyada oo la doonayo in lagu qal-qal geliyo, si loogu fuliyo ajando aan waafaqsaneyn shuruucda iyo dastuurka dalka, sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaa nasiib darro ah in xarunta baarlamaanka lasoo dhoobo maleeshiyaad Bistoolado ku hubeysan oo la doonayo in lagu qal-qal geliyo xildhibaanada, lana doonayo in lagu fuliyo ajando guracan oo baal-marsan shuruucda iyo dastuurka u yaal dalka,” ayuu yiri.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay cambaareynayaan tallaabadaasi, isaga oo hoosta ka xariiqay in dalka aan lagu maamuli karin qoray caaradiisa.
Si kastaba kulanka maanbta ee baarlamaanka ayaa waxaa lagu muujinayaa tuhun ah in muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, waxaana arrintan ay kusoo aadeysaa, xilli xasaasi ah oo uu dalku ku jiro marxalad adag oo kala guur ah.